Iyo Eclipse yekuvandudza kit inosvika neyayo nyowani vhezheni 4.9 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Eclipse yekuvandudza kit inosvika neyayo nyowani vhezheni 4.9
kudzikatidzika kwezuva ndeimwe yeaya IDE ayo anonyanya kushandiswa mukusimudzira Java. Kunyangwe ichigona zvakare kushandiswa nedzimwe mitauro, senge - C ++, PHP, nezvimwe.
Kunze kweizvi Eclipse SDK inotipa mukana wekuwedzera kuenderana nemamwe marongero emitauro pamusoro pekumisikidza kuripo kana ivo vanogona kuiswa seakasiyana Eclipse mapakeji.
Munguva pfupi yapfuura chirongwa Eclipse SDK yakagamuchira gadziriso kubva kune yekutanga concurrent vhezheni Eclipse Foundation makota matatu uye inowanikwa nhasi kuruzhinji.
1 Nezve Eclipse
2 Nezve kuburitswa kutsva kweEclipse 4.9
Nguva iyo huru yekutarisa iri paJava neJava- zvine chekuita nehunyanzvi, inoshandiswa pamitauro yakasiyana, seC uye Python, nekuda kwechimiro chayo chinoshanduka.
Iyo chirongwa chakatangwa neIBM muna 2001 chakakonzera kupokana muJava nyika inoshandisa SWT, iyo inoshandisa chikuva mashandiro panzvimbo peSwing, iyo huru Java grafiti system.
Eclipse Chirongwa, iyo inonyanya kufarirwa nharaunda yekuvandudza pakati pevagadziri veJava, yakakurumidza kusiiwa kune Eclipse Foundation muna 2005 neiyo inokurumidza interface, kutaridzika kutaridzika, uye masimba maficha
Mu Android iyi SDK chinhu chakakosha chenzvimbo yekuvandudza uye emulator inogona kuiswa kuyedza zvirongwa zvakanyorwa. Eclipse yakagadzira mabasa nemapulagi akasiyana; inogona kushandiswa munzvimbo zhinji.
Iine nzvimbo yekushandira yepasi uye yakawedzera plug-in system yekugadzirisa nharaunda.
Inogona zvakare kushandiswa kugadzira zvinyorwa neLaTeX (kuburikidza neTeXlipse plugin) uye mapakeji eMathematica software.
Nharaunda dzekuvandudza dzinosanganisira iyo Eclipse Java Development Maturusi (JDT) yeJava neScala, Eclipse CDT yeC / C ++, uye Eclipse PDT yePHP, pakati pevamwe.
Nezve kuburitswa kutsva kweEclipse 4.9
Chiverengero chezvigadziriso zvebug uye zvimwe zvitsva zvakaverengerwa mumafungidziro anotora pasi.
Uku kuburitswa kutsva kweEclipse 4.9 kunoenderana neEclipse 4.8 (uye dzese shanduro dzekare dze 4.x na 3.x).
Eclipse SDK 4.9 inoenderana neEclipse SDK 4.8, kunze kwenzvimbo dzakataurwa muEclipse 4.9 Plug-in Migration Gwara.
Zvirongwa zvinoshandisa zvakakanganiswa APIs uye ekuwedzera mapoinzi zvinofanirwa kuiswa kune Eclipse APIs SDK 4.9. Kuderera kwechibvumirano kusaenderana hakutsigirwe.
Iko hakuna vimbiso yekuti kutevedzera Eclipse SDK 4.9 APIs kunoona kutevedzera Eclipse SDK 4.8 APIs.
Mukuburitsa kutsva uku Minimap inopa yakakwira-nhanho yekutarisa yezviri mukati meanoshanda mavara edhita ikozvino inobatsira kufamba uye kunzwisisa zviri nani kodhi.
Maonero eMinimap anogona kuvhurwa nekutaipa "minimap" mubhokisi rekutsvaga reKukurumidza Kuwana.
Inogona zvakare kuvhurwa kubva kuWindow> Ratidza Kuona> Vamwe ... menyu uye wozosarudza General> Mini Mepu muRatidziro Ona dialog bhokisi
Paunenge uchishandisa iyo Chirongwa cheProjekti> Hierarchical Mode yeProjekti Yekutsvagisa, mwana weprojekiti yekukanganisa mamaki izvo zvino zvashumwa kune vabereki node, kusanganisira mapurojekiti makuru uye maforodha emamwe mapurojekiti.
Ichi chichaita zvinoita kuti zvive nyore kuona bugs uye kufamba kuburikidza nazvo kubva kuProjekti Explorer apo hutongi hwechirongwa hwapunzika.
Pamusoro peizvi, gadziriso nyowani yekukurumidza yakaitwa iyo inobvumidza mushandisi kushandura static munda kuwana uye nzira dzetsika kushandisa static kupinza.
Izvo zvinoita zvakare kutsiva zvese zvinoitika panguva imwe chete.
Kuti uwane iyi nyowani vhezheni yeEclipse SDK uye zviwanikwa zvinoenderana zvinogona kutorwa pasi kubva kuEclipse projekiti yekurodha peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo Eclipse yekuvandudza kit inosvika neyayo nyowani vhezheni 4.9